Microsoft Band 2 Review: matanjaka indrindra - News Fitsipika
Science & Teknolojia
Solosaina & Computing
Microsoft Band 2 Review: matanjaka indrindra
amin'ny ankapobeny Score4.5
The Microsoft Band 2 dia tsy ny tena tsara tarehy, ny mora indrindra na ela indrindra-maharitra Fitness Tracker misy. Fa efa feno Sela Mpandray Hafanana sy ny fahaiza-manavaka, ary dia iray amin'ireo tanteraka ny mora indrindra-nasongadina mpikaroka mba miara-miaina amin'ny.
Feno Sela Mpandray Hafanana, aina ny akanjo nefa tsy sweaty raha mahaliana manome fomba fijery ao an-tory, fanatanjahan-tena sy ny fahasalamana
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Microsoft Band 2 famerenana: iray amin'ireo mahery vaika indrindra sy mahasoa Fitness mpikaroka” nosoratan'i Samuel Gibbs, fa theguardian.com ny Zoma 22 Janoary 2016 07.00 UTC
Microsoft faharoa amin'ny fanaovana andrana ny Fitness Tracker dia be aina kokoa sy tsara tarehy kokoa noho ny voalohany, feno Sela Mpandray Hafanana, ary somary mora ny miara-miaina amin'ny.
The Microsoft voalohany Band dia chunky, clunky fitaovana, ary raha mbola, amin'ny fomba, izany aina kokoa noho ny fitaovana izay ilaina mba hanaovana mafy any amin'ny hato-tanana, nisy mihoatra noho ny kely whiff ny heloka bevava dia fehin Tracker momba izany.
Fit sy farany
Ny tarika dia manana curved naseho, malefaka fingotra ary ny mafy lafiny vongan izay tsy ampy ny clasp ary ahitana ny vatoaratra sy ny electrodes ny Sela Mpandray Hafanana. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
The Microsoft Band 2 lavaka ny plastika efijery ho Gorilla Glass maneho sy ny vy vatana. Toa tsara, dia mora ny mamaky miaraka amin'ny mazava sy mamiratra AMOLED miseho, ary tsy nopotehiny na voarangotra tamin'ny roa volana amin'ny fampiasana azy io amin'ny fotoana rehetra. Ary ny sisa tamin'ny antokon'ny miaramila atao ny mafy, nefa hentitra loatra mainty fingotra amin'ny vy sy plastika clasp chunk roa Contacts vy eo amboniny.
Ny chunk dia ny bateria, ary ny metaly fifandraisana dia ho an'ny sasany ny hoditra Sela Mpandray Hafanana. Ny clasp dia sliding, hanoto-bokotra famotsorana, izay tsara. Afaka maka izany dia eny, ary hanitsiana azy mora foana ny lalitra - tena ilaina, raha ianao eo amin'ny fampiononana ara mendrika ho an'ny isan-andro Tracking sy mataho- tra ianao fa mety ny hisorohana azy hifindra manodidina eo amin'ny hato, rehefa mandeha ny hazakazaka.
Ny ambony sy ny ambany tamin'ny antokon'ny miaramila mihazona izany eo amin'ny toerana eo amin'ny hato-tanana raha tsy misy ny lafiny roa amin'ny tarika manana ny ho mafy, midika fa be kokoa noho ny sasany tsy sweaty mpifaninana. Manaova avy namafa amin'ny lobaka Cuff dia hita mazava tsara rehefa afaka roa volana, na izany aza. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Tsy mifanaraka ambany lobaka Cuff, Tsy sweaty ary tsy manana ny hahatsapa mafy amin'ny hato. Tsy mora ihany koa ny mitendry izany tamin'ny, toy ny tarika manodidina ny lafiny ny hato-dia manify, fa ny farany eo amin'ny fingotra dia mampiseho miharihary ny famantarana ihany no anaovan'ireo taorian'ny roa volana.
The Band 2 Tsy tantera-drano, fa hatsembohana-porofo. Tsy misy handrotsaka izany amin'ny, na milomano, fa ho tafavoaka velona workouts tsy misy olana.
Display: 12.8MM x 32mm AMOLED (320×128 teboka)
Fifandraisana: Bluetooth 4.0
mifanentana: Android 4.3+, iPhone 4S na taty aoriana, Windows Phone 8.1 na taty aoriana
Sela Mpandray Hafanana: Optical fo tahan'ny, 3-mpiray accelerometer, gyrometer, GPS, Ambient fahazavana, UV, hoditra mari-pana, capacitive sensor, galvanic hoditra valin-, Barometer
Ny fo Optical tahan'ny sensor mipetraka eo amin'ny hato-tanana ambanin'ny fampisehoana, fanaovana ny fifandraisana mafy orina amin'ny an'ilay mitafy azy ny hoditry. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
The Band 2 dia iray amin'ireo teknolojia mandroso indrindra Fitness mpikaroka misy amin'ny 10 Sela Mpandray Hafanana samy hafa sy ny mikrô. Ny sasany manome mivantana ny Sela Mpandray Hafanana hamaky-outs, toy ny am-po lalandava Optical-tahan'ny sensor (izay iray amin'ireo tena marina pitsapana aho), ny UV sensor sy ny GPS. Ny hafa indray dia ampiasaina in mitambatra mba mamantatra dingana sy asa atao, workouts lalana sy ny zavatra hafa.
Toy ny Original Microsoft Band, ny sasany amin'ireo Sela Mpandray Hafanana toa tsy azo ampiasaina, na, fara fahakeliny, ny tahirin-kevitra dia tsy mbola azo idirana mpampiasa.
Ny ankamaroan'ireo ny vaovao azo jerena ao amin'ny tarika ihany, na amin'ny alalan'ny tranonkala ny fampiharana sy ny fampiharana, Izay no iray amin'ireo tsara indrindra no nahazoana misy Fitness Tracker.
The Band 2 ihany koa ny mamantatra ny torimaso ary manana tadin fanairana ny hampifoha anareo amin'ny fotoana tsara indrindra. Ny tahirin-kevitra voarakitra no sasany amin'ireo tena mahaliana na matory Tracker no nizaha toetra. Izany koa dia mampiseho ny fitsipika mazava, mampitony ny torimaso lalina sy marika amin'ny alina. Fa izaho koa mahita fa rehefa misotro labiera iray vera, na divay alohan 'ny hatoriana ny foko tsy tonga ny fitsaharana 49 mitempo isa-minitra raha tsy taorian'ny toaka efa nanala avy ny rafitra ao amin'ny misasakalina.
Zavatra tsy ampy torimaso dia tena mahaliana, manome fahalalana mihoatra fotsiny mandra-pahoviana na ny fomba natory lalina ianao. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Natory aho, fa ny toaka efa ela fitsaharako, izay manazava ny antony na dia kely fotsiny ny toaka ho ahy kokoa ny reraka maraina.
Microsoft Health Feno kely ireo tapa-baovao izay manao izao tontolo izao ny fiovana ho amin'ny fahalalako ny tahirin-kevitra, ary ny fanatsarana isaky ny vaovao farany. Sehatra hafa tsy manolotra tena mitovy inferences na antsipirihany nefa tsy voatery handoa ny sarany isam-bolana.
Ny iray amin'ireo endri-javatra vaovao tsara indrindra dia ny fahafahana hanorina fanao workouts ary mampakatra azy ho amin'ny Band, izay afaka dia manara-maso ny fandrosoanao, na amin'ny alalan'ny vita reps na ny fotoana.
Custom workouts dia iray amin'ireo hevitra mahery Band ny, mitarika anao amin'ny alalan'ny sy mirefy reps na ny fotoana. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Tena haingana sy mora ny manao. Aho nanao ny 10-dingana faritra-fiofanana fivoriana amin'ny tokony ho dimy minitra, nampakatra izany ny Band, ary lasa aho nandeha. Raha toa ka tsy azo antoka ny zavatra ianao manao maro ireo baikoina mialoha fanazaran-tena sy ny tapaka, feno amin'ny fanazavana tsara indrindra lahatsary, misafidy avy.
Zavatra tsy ampy ihany koa mandeha tsara, fahazoana sy fihazonana ny toerana vahaolana ny GPS, na dia tsy tena toy ny vokatra toy ny vita fanoloran-tena nihazakazaka miari-po-ny tahan'ny tarika fiofanana.
Microsoft ny 'taila' ireo Apps kely izay manao zavatra amin'ny tarika, avy Tracking torimaso ny fanomezana finday avo lenta fampahatsiahivana. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Mafy orina any an-dafin'ny Fitness-Tracking endri-javatra napetraka, ny Band 2 mitondra tena toy ny pseudo-smartwatch. Afaka mampiseho fampahatsiahivana avy amin'ny smartphone, ao anatin'izany ny antso, mozika manana fanaraha-maso ny roa amin'ny paompy ny bokotra, ary manana taila for Twitter, Facebook, Messenger, Stocks, Weather sy Starbucks, izay mamela anao handoavana ny kafe amin'ny barcode.
Mifandray amin'ny Windows Phone mpampiasa dia afaka miditra ny virtoaly Microsoft mpanampy Cortana misintona ny feo vaovao sy hanao fanaraha-maso. Ny ankamaroan'ireo endri-javatra hafa, anisan'izany ny mozika playback fanaraha-maso ny asa amin'ny Android sy ny iOS koa.
Ny dovia magnetically antoky hatramin 'ny farany ny andilany sy ny plugs ho USB fahefana adaptatera. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
The Microsoft Band 2 naharitra roa andro monja eo fiampangana amin'ny fitiliana. Fampiasana ny GPS ho mihazakazaka nampihena ny bateria fiainana, toy ny no mampiasa azy io ho toy ny fiambenana sy ny varavarana lamba amin'ny fotoana rehetra, na manana ny fampahatsiahivana nalefa tany amin'ny tarika. I hitany fa mamaly izany ny 20 minitra isan'andro - 10 minitra raha handrotsaka sy 10 minitra raha fanilihana ny nify alohan'ny am-pandriana - dia ampy mba hitandrina azy teo anelanelan'i 50 ary 80% nandidy.
Ary nasain'i tanteraka ao anatin'ny adiny iray mahery amin'ny USB, andriamby dovia ny rakitsary tao ny faran'ny ny andilany tamin'ny tanan'ny mafy.
The Microsoft Band 2 ny vidin'ny £ 200 ao anatin'ny telo habe, kely, salantsalany sy lehibe, nefa iray monja no loko. Fa raha oharina, ny Fitbit Surge vidin'ny £ 200 toy izany koa fepetra arahana.
The Band 2 azo hanaovana ao anaty na ivelan'ny hato-tanana, eto am-po mampiseho tahan'ny. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
The Microsoft Band 2 dia tsy ny tena tsara tarehy, ny mora indrindra na ela indrindra-maharitra Fitness Tracker misy. Fa efa feno Sela Mpandray Hafanana sy ny fahaiza-manavaka, ary dia iray amin'ireo tanteraka ny mora indrindra-nasongadina mpikaroka mba miara-miaina amin'ny. Tena hazo fijaliana-mifanentana amin'ny Android, iOS sy Windows dia nidera, tahaka ny fampiharana sy ny angona fijerena ny Microsoft ny Health App.
Izany no mahatonga ny tsara, nandroso tarika tokony hanaovana ary koa tahaka ny moana fiambenana, mifanaraka ambany ny lobaka Cuff, fa tsy ilaina ho avy-ary-avy smartwatch. Misy ihany koa ny fanontaniana marika manodidina hafiriana izany Ho haharitra, manana hita aseho famantarana ny anaovan'ireo ao amin'ny roa voalohany volana.
Mahatsara: sensor-Feno hipoka, mitohy fo tahan'ny, GPS, tsy sweaty, tsy hesoriko volo, tsara angona fijerena, cross-sehatra, tsy misy sarany isam-bolana, lehibe ny torimaso ampy, fanatanjahan-tena fanao fitondrana / ampy, fampahatsiahivana
Maharatsy ny mifampiresaka: tsy tantera-drano, tena chunky, fingotra mampiseho famantarana ny anaovan'ireo, bateria mety ho tsara kokoa ny fiainana
Ny asa clasp Tena tsara mamela mora on-the-lalitra fanitsiana fotsiny sliding izany teny an-slot. Ny clasp ihany koa dia manana UV sensor eo amboniny. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Microsoft Band famerenana: sensor-Feno hipoka - raha tsy mampaninona mijery toy ny mpanao ratsy
Fitbit Surge famerenana: Zavatra tsy ampy ny Fitness hatrany mba tsy tena faran'izay
Android, Article, Fitness, Gadgets, IOS, Ny fiainana sy ny fomba, Microsoft, Famerenana, Samuel Gibbs, Teknolojia, Wearable teknolojia, Windows Phone
← 15 Funny Zavatra Azonao Soraty Ho Google Huawei Mate 8 Review →
Mahery ny saina
Misotro Coffee Mety Ahenao Mamono Tena Risk!
5 Fomba hanazava Up ny Bedroom
Amboadia’ Midradradradra Azo ID'd ny Computer
Ny volamena Apple iPhone 5S mbola nandinika filaharam-be tany Londres
New Famonoana Drug Vao 10 Minitra hahafatin-ketaheta anay mpamono olona
Microsoft Windows dia hanatitra 10 maimaim-poana in Jolay
Kanseran'ny nono Cell Fitomboana nijanona ny fahosan'ny taolana Zava-mahadomelina
Amazon Echo: Ny voalohany 13 Zavatra to Try
Nintendo Switch: Inona no miandry izahay avy amin'ny New Console
Google Glass – Voalohany People Nosamborina
Enimpolo maty na tsy hita any Kanada fiaran-dalamby loza.
Parrot asteroid Smart Review: Android ao amin'ny Car ny Dash?
10 Mampino tombony amin'ny Anti Oxidants Fa Skin, Hair Ary Wellness
8 Antony izay mahatonga ny Dark Circles
4 Zavatra Tokony ho fantatrao momba ny endrika fisie PDF
28 Fantastic Soa azo avy amin'ny Mosambi (Sugary sakafo Lime) Fa Skin, Hair Ary Wellness
Ahoana no azonao Mifidiana nianjera fanamainana
San Francisco lozam-piaramanidina:
Famerenana fahitalavitra Nvidia Shield: ny boaty fahitalavitra Android tsara indrindra miaraka amin'ny AIccaling mihaingo
Best finday avo lenta 2019: iPhone, OnePlus, Samsung sy Huawei nampitaha sy laharana
iPhone 11 Pro Max famerenana: notsimponina no ny Epic bateria fiainana
Apple Watch Series 5 tanana-on
Pin It amin'ny Pinterest